UClara Peñalver. Ingxoxo nombhali weSlimion | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 13/08/2021 12:00 | Izingxoxo, Abalobi, Amabhuku
Izithombe. UClara Peñalver. Ikhasi le-Facebook.
UClara Penalver ungumlobi futhi ungumxhumanisi wokudala. Inoveli yakhe yakamuva uthi I-Sublimation futhi kusekelwe ochungechungeni lwasekuqaleni lwe- Indaba. Ikhishwe nge- I-Sangre futhi ungumdali wochungechunge lwe U-Ada Levy -Ungayibulala kanjani i-nymph, Umdlalo wamathuna y Ukuqhekeka Kwe-hourglass—. Ngaphezu kwalokho, naye uyabhala izincwadi zezingane futhi ubambisene emsakazweni nakuthelevishini. Nginibonga kakhulu unikele isikhathi sakho esincane ku le ngxoxo, kanye nomusa nokunaka kwakhe.
UClara Peñalver - Ingxoxo
UMBHALO MANJE: I-Sublimation Yinoveli yakho entsha, ephume njengochungechunge lomsindo. Usitshelani ngayo nangokukhulelwa kwayo ngale ndlela?
I-CLARA PEÑALVER: I-Sublimation yindaba ukuthi wahlupheka uhambo oluningi lwenhlanhla ngaphambi kokugcwaliseka. Okokuqala, wazalwa njenge- injabulo yesikhathi esizayo ngokufa njengesikhungo nentambo ejwayelekile. Ekuqaleni, kwakukhona indaba eyodwa kuphela ekhanda lami, ngaphandle kokufomatha, ngakho-ke lapho kungenzeka ukuthi kubhalelwe i- Indaba, Nginqume ukuyifaka ku- imithetho yochungechunge lomsindo.
Konke lokho phakathi kokuphela kuka-2018 no-2019. Lapho ngigcina sengisayine inkontileka futhi ngiqala ukusebenza ngendaba, u-2020 wafika futhi, nalo, ubhadane. I- bhubhane kungiphoqe ukuthi ngenze okuningi izinguquko emlandweni, ikakhulukazi maqondana nobhadane uqobo. Indaba yami ibisuselwa kwimiphumela igciwane ebinayo emhlabeni wonke futhi, lapho ngangivele ngibhala I-SublimationNgokuphazima kweso, wonke umuntu wayethatha inkambo yokuphahlazeka yokuthi igciwane lisakazeka kanjani, ukuthi lisuka kanjani kumqedazwe liya kubhubhane, nokuthi isintu kufanele sivumelane kanjani ngokugcwele nesimo esicishe sifane nalesiya simo. Ngizizwe ngiyisilima ngitshela abalaleli nabazofunda ngokuzayo okuthile obekuzovele kwazi cishe kangcono kunami ngenkathi kushicilelwa indaba, ngakho-ke ngenza izinguquko.
Ngasusa konke okuphathelene nokudluliswa kwegciwane, yomthelela wayo kumthelela ezingeni lomuntu. Lokho kubangele ukuthi izinhlamvu zayo eziningi zikhule nokuthi kwavela abanye Nuevos, okungahle kube yinkinga enkulu emlandweni, kwagcina sekungukuthi, ukushaywa kwakhe yinhlanhla. Indaba isingcono kakhulu manje.
CP: Ngikhumbula incwadi yokuqala engayidla, a ukujwayela kusukela encwadini ka-Agatha Christie Ukubulala ku-Orient Express, ihlelwe nguBarco de Vapor futhi inesihloko esithi Ukubulala ku-Canadian Express. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyidlile leyo noveli, ukuthi bengihlala ekhasini ngalinye layo, nokuthi, ukusuka lapho, ngaqala ukushwabadela incwadi ngayinye eyawela ezandleni zami.
Mayelana nendaba yokuqala engiyibhalile, ake sithi, indaba ethe xaxa (ngoba bese ngivele ngibhale okuningi okubi - kubi kakhulu - izinkondlo nezindaba eziningi ezimfushane), angisikhumbuli isihloko, kepha bekuyi inganekwane enhle ngentombazane engazelele yaya kwenye indiza lapho yayihileleke khona empini phakathi kwemibuso futhi ... kahle, into enhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi bekuse iminyaka eyishumi nesithupha nokuthi kanye naye banginikeze i- ukuqashelwa kwendawo emncintiswaneni wezindaba wedolobha lami. Ngangiqala ngqa ukuba sephephandabeni.
CP: Iqiniso ukuthi nginababhali abaningi bamakhanda, ngaphezu kwalokho, bayashintsha kuye ngencwadi engizithola nginayo, ezingeni lokubhala engikushoyo.
Isibonelo, nge I-Sublimation, UPhilip K. Dick noGeorge Orwell babengababhali bami abayinhloko. Yebo, bobabili nomlobi we Ihlobo umama wami abenamehlo aluhlaza, UTatiana Țîbuleac, ngaleso sitayela sokulandisa sicebile futhi beshesha kangangokuthi sikhombisa umusho ngemuva komusho. Ngiyithandile leyo noveli yakhe yokuqala eyashicilelwa lapha eSpain kangangokuthi angikwazanga ukusiza umfutho wokuyibiza ngegama lami I-Sublimation.
Ngenoveli yamanje, ababhali bami abayizethenjwa UMartin Amis, u-Amelie Nothomb (Ngibuyela kuye kakhulu, ikakhulukazi kuye I-Metaphysics yamashubhu) futhi U-Ernesto Sabato.
CP: Ngaphandle kokungabaza inkosi Ripley, kaPatricia omkhulu Highsmith. Nginentshisekelo kakhulu, cishe ngithathekile, ukuhlukaniswa kwengqondo yomuntu, futhi iHighsmith yayikuthanda kakhulu lokhu.
CP: Ngesikhathi sokufunda cha.
Ngesikhathi sokubhala nginezinto ezimbalwa zokuzilibazisa, kusuka ku- ngilwe nezibaya noma izimpaphe, uma usuku olulodwa ngingazange ngithele ngokwanele ngazo, ngize ngidinge itafula lami lihlanzeke ngokucophelela uma kusehhovisi engizosebenzela kulo. Futhi Ngibhala ngesandla, ezincwadini zokubhalela ze-Paperblanks ezikhethelwe indaba ngayinye ngokukhethekile, okungahle kube phakathi komkhuba omuhle ne-iron mania.
CP: Kepha i-leer, uma ngiphethe incwadi yamaphepha, ngiyathanda ukuyenza esofeni noma embhedeni; kwesinye isikhathi futhi kwezinye indawo yokudlela. Uma i-audioleo, okungukuthi, uma ngilalele i-audiobook noma uchungechunge lomsindo, Ngikwenza usuku lonke, ngenkathi nginakekela ingane yami, ngenkathi ngipheka, ngenkathi ngihamba ngomgwaqo, ngenkathi ngiya ezitolo. Ngamafuphi, nganoma yisiphi isikhathi noma nganoma yimuphi umsebenzi ongadingi umzamo wengqondo. Okusho ukuthi uma ngikwazi ukufunda amanoveli amabili ephepheni ngenyanga, ngokubalalela ngingadla izincwadi ezintathu noma ezine ngesonto, into engijabulisa kakhulu, futhi engivumela ukuba ngizijabulele izincwadi ngenye indlela.
CP: Empeleni, ngiyifoloni yenganono ye ukulandisa kwanamuhla. Ngifunde kuphela Thriller noma inoveli amaphoyisa lapho angibhali futhi ukungijabulisa, cishe awusoze waba ngumthombo wokufunda.
CP: Manje ngisanda kuqeda Ayibonakali, of Paul auster, Sengizofika enoveli elandelayo ngumbhali ofanayo, Ukugxuma kokubulala, inezimpawu ezikhuluma ngokuphila komuntu. Nami nginjalo ngigxilile ekubhaleni okulandelayo Thriller, ngaphezulu ngesitayela samanoveli ka-Ada Levy kune- Amazwi kaCarol o I-Sublimation, okusho ukuthi yi I-Thriller lapho ngiphula khona yonke imithetho kwadingeka nokuba nakho. Kuyinoveli engihlose ukuyiphothula, bese ngiyiletha, ngoSepthemba.
CP: Yebo, ngicabanga ukuthi indawo yokushicilela iyiyo kuthakazelisa kakhulu kunakuqala. I umkhakha Incwadi yendabuko ikhombisile ngesikhathi sobhadane ukuthi usenamandla ukuqhubeka, yize kusobala ukuthi kunezinguquko nokuzivumelanisa okuningi nezikhathi. I- ifomethi entsha emkhakheni wezincwadi, ngibhekisa kuwo alalelwayo, kusikhombisa ukuthi lokhu kufunda nokujabulela izinganekwane ezibhaliwe akugcinanga ngokuqedwa, kepha iyachuma.
CP: Ake sibone, angizukutshela ukuthi bekulula, umsebenzi wami uthinteke kakhulu, ikakhulukazi emisebenzini ebengihlala ngiyenza ngaphandle kokubhala. Kodwa-ke, ngithole izinto eziningi ezinhle kulo bhubhane, okokuqala, indodakazi nobudlelwano obuyigugu nomlingani wami.
Futhi kwangisiza nami shintsha ukuhleleka kwami ​​kokubalulekile, nokuziqondisa emsebenzini ukuze ngifinyelele ezinhlosweni ezanelisa kakhulu, hhayi ezilula, kepha eziqabula kakhulu futhi ezithokozisayo. Okusho ukuthi kunjalo Ngithola izinto ezinhle kukho konke lokhu. Ukube angizange, ngangiyoyeka ukuba yimi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » UClara Peñalver. Ingxoxo nombhali weSlimion
UNieves Herrero: izincwadi